“စာမျက်နှာလယ်ထွန်စက် |လယ်ယာထွန်စက်တာယာကိုလေပေါ်မှာပဝယ်နိုင်ဘယ်မှာရောင်းချခြင်း” – Tractor Loader
Posted on October 20, 2018 by Maribel Hernandez
၁၁။ ကျွန်းစိုက်ခင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရှိ၍လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အသေး စိတ် မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ထားရှိရမည်။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ အခါအား လျော်စွာ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ အကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များ ရေးသားပါက ယင်းအကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ရမည်။
သူမ “ငါႏိုင္ငံၿခားသြားမလို ့”။သူငယ္ခ်င္း ” ဘာလုပ္ဖို ့”။သူမ ” ပိုလွေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသမလို ့”။သူငယ္ခ်င္း ” အေတာ္ကုန္မွာပဲေနာ္”။သူမ ” သိန္း၂၀၀ ေလာက္ေတာ ့ကုန္မွာေပါ ့”။သူငယ္ခ်င္း ” ႏွေၿမာစရာႀကီးဟယ္”။သူမ ” ကိုယ္ခ်စ္သူအတြက္ပဲကြာ”။သူငယ္ခ်င္း ” စဥ္းစားပါဦးကြာ။ မင္းမွာရွိတဲ ့သိ္န္း၂၀၀ကုန္သြားရင္မင္းခ်စ္သူက မင္းကို ခ်စ္ပါဦးမလား”
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ပညာရှင်များ၏ခိုင်ခံ့သောအကူအညီများနှင့်အတူကျနော်တို့ကျစ် Hose 316 SS-43-FL Code ကို 61 အနားကွပ်တင်းကျပ် Hydraulic Fittings တစ်ခုကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ ဒါဟာအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏နိုင်ခဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်၌သာလွန်အရည်အသွေးကိုကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းစနစ်၏အကူအညီနှင့်အတူထုတ်လုပ်နေသည်။
အဆိုပါပိုက်တခြားရှေ့ဆက်အပေါ်ဂျက် switching အားဖြင့်သံသရာတွန်းများနှင့်ရွေ့လျားမှု reverse ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလဲလှယ် headband တွန်းအားပေးကျရှညျ nozzle, ramrods သို့မဟုတ် clamping ကော်ရှောက်သွားပြွန်မှဂျက်၏ဖိအားပေးမှု။ 1 ကိုနှိပ် extension ကို nozzle အရှည်လျှောက်ထားခုနှစ်တွင်, 2, ပုပေါက်လေဖြတ်ခြင်း၏လှံတံ၏အရှည်အားဖြင့်မြေပြင်သို့ပြွန်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်34 မီတာ (ဥပမာ, 1 မီတာ) ပင်စည်မူရင်းအနေအထားမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရရှိလာတဲ့အာကာသနှစ်ဆအရှည်၏အခြားပိုက်ထဲသို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဒါသည်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် ကိုလက်စသတ်ထိုးဖေါက်ခြင်းယူနစ်ပထမဦးဆုံးပြွန် (ပုံမှန်အားဖြင့်6မီတာ) အထိပါပဲ။ ထို့နောက်ဒုတိယ link ကိုရမညျ welded နှင့်ပိုက်လိုင်းတစ်ခုလုံးအရှည်ပြီးစီးသည်အထိဤအစစ်ဆင်ရေးဟာထိုးဖေါက်ခြင်းသည်အထိထပ်ခါတလဲလဲနေကြသည်။
အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လယ်ယာမှချေးလျှောက်ထားမှုအတွက်စနစ်များ၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုက်ရိုက်အမြတ်အစွန်းနှင့်မွေးမြူရေးထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိခိုက်ကတည်းကကုမ္ပဏီအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသို့စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်တန်ဖိုးနည်းနည်းပညာများနှင့်ပြန်လည်ချေးအသုံးပြုရမည်, Peregoudov အကြံပေး။
အများစုမှာမကြာခဏလုပ်ငန်းရှင်များကြက်နှင့်မွေးမြူရေးကြိုက်တတ်တဲ့။ အမဲသားကိုစျေးကွက်ဖြန့်ဝေ, ဥ, နို့, သိုးမွှေး, အမွေးအတောင်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ – ဤလှုပ်ရှားမှုန်ဆောင်မှုများကိုလုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကောင်းတစ်ဦး option ကိုအစေ့သို့မဟုတ်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမျိုးစေ့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုကြီးမားတဲ့စားသုံးသူပရိသတ်ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အထက်ပါပစ္စည်းများအပြင်, သငျသညျလယ်ယာစိုက်ပျိုး၏အခြားအကိုင်းအခက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒိုင်းလွှားကျမ်းပိုဒ် (စုဆောင်း) ဒိုင်းလွှားကို device ကိုတပ်ဆင်ထားနှင့်၎င်း၏ယန္တရားများအတွက်လုပ်ရပ်အားဖြင့်သာလက်ခံပြီးနောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ခံရမည်အခါ။ မြေဆီလွှာကိုသာ visor ဒိုင်းလွှားကိုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရပါမည်။ ဒါဟာလက်စွပ်၏နံရံရဲ့ width ထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့အကွာအဝေးမှာဒိုင်းလွှားကိုရွှေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မတည်မငြိမ်ခုနှစ်, ပျော့ပျောင်းသောမြေပြင်မျက်နှာနဖူးယာယီထောက်ခံမှု fixed ရပါမည်နှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်မြေဆီလွှာများထဲမှာ, စည်းကမ်းအဖြစ်, မြေဆီလွှာလျှောစောက်များ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်အခြေအနေကနေလက်ခံရရှိ၏နံပါတ်အလျားလိုက်အနားကွပ်နှင့်အတူပြားသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပေသည်။ လူများတို့သည်အောက်ခြေအနီးနေထိုင်ရှောင်ရှားနေချိန်မှာရွှေ့လွှားတစ်ခုသာအလုပ်သမားများကြီးကြပ်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူအကျင့်ကိုကျင့်၏ရှေ့တော်၌အခွင့်ပြုထားသည်။ ဒါဟာလက်စွဲစာအုပ်နှင့်စက်မှုလယ်ယာ haulage ၏တူညီသောပြုပြင်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုမထားပေ။ လက်စွဲတစီးကိုအတွက်အလင်း signal ကို၏အရှေ့ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာကုန်တင်ကားသတ်မှတ်ထားရပါမည်။ ရိုးတံများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (စုဆောင်း) နစ်မြုပ်တဲ့အခါမှာလေဝင်လေထွက်စီစဉ်ပေးသင့်သည်။ ကွင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနံရံတဦးတည်းယူနစ် (ဒြပ်စင်) ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အောင်မြင်မှုစုဆောင်းရပါမည်။ သီးနှံများကိုပုံတစ်ခုချင်းစီကိုနောက်ဆက်တွဲယူနစ်သာယခင်တဦးတည်း၏အယုံကြည်စိတ်ချရသောစွဲစေပြီးနောက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ယင်းယန္တရားနှင့်ကိရိယာများပေါ်တွင်အားလုံးသည်လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် start-up လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လုံလုံခြုံခြုံ grounded ခံရဖို့ရှိသည်။
သစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းတည်ဆောက်ရန်အသုံးမရသောနှင့်များစွာသောကျွမ်းကျင်သူတွေကပြီးသားဆောက်လုပ်ထားလယ်ယာများအတွက်ကြည့်ဖို့အကြံပြုသည်။ အခန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတာနဲ့ပုံမှန်ရေပေးဝေရေးနှင့်လျှပ်စစ်မီးပေးဝေလျှင်, တစ်ဦးအလုပ်လုပ်အခန်းထဲလေဝင်လေထွက်လည်းမရှိရှိမရှိစစ်ဆေး, လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ – ဝန်ထမ်းငှားရမ်းဖို့လျော့နည်းလိုအပ်ချက်ပိုမိုအခန်းထဲမှာလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ: ဒါဟာတဦးတည်းကိုပိုမိုတကယ်တော့စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါပေမယ့်လက်ထက်, ကကောင်းတစ် VET, စာရင်းကိုင်နှင့်မန်နေဂျင်းမွေးမြူရေးလိုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားဝန်ခံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။မကြာခဏ, သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကြောင်းကို 5-6 နှစ်ကြာပိတ်ထားချေအခါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အီရန်အစိုးရသည် နက်ရှိုင်းသော အစုံလိုက်သုံးပက်ကက် စစ်ဆေးခြင်း အတွက် စနစ်တစ်ခုကို နော်ကီယာ ဆီမန်း ကွန်ရက်များ (NSN) မှ ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ပြောဆို ကြသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လထုတ် ဝေါ(လ်)စထရိ ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြထားသော NSN ပြော ရေးဆို ခွင့်ရှိသူ Ben Roome (ဘန် ရွမ်မီ) ၏ အစီရင်ခံစာမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်အရ NSN သည် ဂျာမန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများစွာကို ပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားသော ကော်ပိုရေး ရှင်း ကြီးဖြစ်သော ဆီးမန်း အေဂျီ နှင့် ဖင်လန် ဆဲ(လ်)ဖုန်း ကုမ္ပဏီဖြစ်သော နော်ကီယာ ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတွင် အမည် မဖော်ပြ ထားသော ပညာရှင်များ၏ ဖော်ပြချက်များအရ၊ စနစ်သည် “ဆက်သွယ်မှုကို ပိတ်ဆို့တား မြစ်ရန်သာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက် အလက်ကို စုဆောင်း ရန် ၎င်းကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် လုပ်ကြံသတင်း ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ၎င်းကို ပြောင်းလဲ ရန် အာဏာပိုင်များအား စတင်လုပ်ဆောင်စေသည်။”
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝ ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မူ နှင့် တင်ပို့မူ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ကြေးနီ၊ ကျောက်မျက် ရတနာများ၊ ခဲမဖြူ (ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယအများဆုံးထုတ်လုပ်သူ)1၊ အဖြိုက်နက်၊ ခနောက်စိမ်း (ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဌမ အများဆုံးထုတ်လုပ်သူ)2 နှင့် ဇင့် အပါအဝင် ဓာတ်သတ္တု ကုန်စည် အမျိုးမျိုး ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
DPI လုပ်ဆောင်နိုင်သော စက်များတွင် OSI မော်ဒယ်(လ်) ၏ အလွှာ ၂ နှင့် အလွှာ ၃ အပြင် ဘက်ကို ကျော်လွန်၍ ကြည့်နိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက OSI မော်ဒယ်(လ်)၏ အလွှာ ၂-၇ ကို ဖောက် ၍ ကြည့်ရန် DPI ကို လှုံ့ဆော်နိုင်သည်။ ဤအရာတွင် ခေါင်းစီးများနှင့် အချက်အလက် ပရိုတိုကော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့် မက်ဆေ့(ခ်ျ)၏ အမှန်တကယ် သယ်ဆောင် နိုင်သော ဝန်ချိန် တို့ပါဝင်သည်။ OSI မော်ဒယ်လ်၏ အလွှာ ၃ ပြင်ပရှိ သတင်းအချက်အလက် ပေါ် အခြေခံ၍ စက်သည် အခြားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင် ရွက်ခြင်းပြုသော အခါ DPI ၏ အလုပ် လည်ပတ်မှုကို လှုံ့ဆော်စေသည်။ အစုံလိုက်သုံး တစ်ခု ၏ အချက်အလက် အပိုင်းမှ ထုတ်နုတ်ထားသော သတင်းအချက်အလက် ပါဝင်သည့် ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာ database ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အသွားအလာကို DPI အနေဖြင့် အ မျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ ခေါင်းစီး သတင်း အချက်အလက် ပေါ်တွင်သာ အခြေခံ၍ အမျိုးအစား ခွဲခြင်းထက် ပို၍ အနုစိတ်သော ထိန်းချုပ်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ အမှုကိစ္စ အများအပြားတွင် DPI လှုပ်ရှားမှုများကို တိမ်းရှောင်ရန် လျှို့ဝှက်စာ ဖြင့်သိမ်းခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးစေသည့် နည်းလမ်း များကို အဆုံးမှတ်များမှ အသုံးပြုနိုင်သည်။
“အဲဒီအဆင့်တွေ ပြီးသွားရင် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီနဲ့ တောင်သူနဲ့ကို စာချုပ် ချုပ်ပေးပြီး 10 percent ပေါ့။ သိန်း ၃၀ဝ တန်တဲ့ စက်ဆိုရင် သိန်း ၃၀ ကို အရင် သွင်းရပါမယ်။ စက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့ရဲ့ စနစ်အရ ၆ လ တကြိမ်ကို ကျန်တဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းစီခွဲပြီးတော့ ၃ နှစ်အတွင်း ဆပ်ရပါမယ်။ အရစ်ကျ ပိုက်ဆံမကျေခင်မှာ တောင်သူကို ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား ပေးမှာ မပါဘူး။ ပိုက်ဆံကျေမှ ပေးမှာပါ” ဟု ဦးစိုးလှိုင်က ပြောသည်။
prokolnoi တပ်ဆင်ခနှင့်အတူ Glavmosstroy မသက်ဆိုင်သည်၎င်း၏အစိုဓာတ်ကိုအကြောင်းအရာများ၏ပြွန်အချင်းအရှည် 209-426 မီလီမီတာနှင့်မြေဆီလွှာများအုပ်စုများငါ-IV အတွက် 45 မီတာထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ အဆိုပါကိရိယာ၏နိယာမရက်နေ့တွင်, GPU ကို-600 setting အဖြစ်လုပ်ကိုင် “လမ်းလျှောက်ဂျက်။ ”
Previous PostPrevious “google tracteur +ce John Deere à acheter”
Next PostNext “implementos compactos para tractores |comprar John Deere d130”